Home News Wadooyinka Xiran ee Muqdisho Iyo Saameynta Ay Ku Yeelatay Bulshada Qeybaheeda Kala...
Wadooyinka Xiran ee Muqdisho Iyo Saameynta Ay Ku Yeelatay Bulshada Qeybaheeda Kala Duwan Balan Ka Baxyada Maamulka Kooxda Qiyaano Qaran
Waxa maalintii Sedexaad xiran Wadooyinka ugu muhiimsan ee caasimada dalka muqdisho waxa ayna arintaasi ay kentay in culeys badan uu soo foodsaray Shacabka ku dhaqan guduha magaalada muqdisho.
Inkaso ay caado ka noqtay dowlada Madaxweyne Farmaajo xirnaanshiyaha wadooyinka iyado an waxba la iska weydiin waxyeelada ay kala kulmayan shcabka ku dhaqan magaalada Muqdisho,iyado ay xusid mudan tahay in Madaxweyne Farmaajo uu uu tira dhowr jeer ah ku cel celiyay waqtigisi ololaha dorashada uu ku jiray in wadooyin la xiro aysan jiri doonin hadi uu talada dalka hogamiye u noqdo.
Xirnaanshiyaha wadooyinka aya sameyn ku yeshey shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waxana hawanaya ganacsiga suuqa weyn ee bakaaraha madama dadki uso dukaameysi tagayay iyo ganacsataada qaar aysan usura gali kari in ay so garaan suuqa ganacsiga ee Bakaaraha.
Waxa sido kale dhibaato xoogan ah shacabka oo lugeynaya jidadka laamiyada ah iyado Ay bilawdeen Bilihii kuleelka,Muqdisho aya hada ah mid kulul dadkuna waxa ay halki ay isticmali jireyn gawaarida dadka qaada ee BIIELKA lo yaqaano iyo Tagaasidu intuba aysan socon waxa ay dadka maalayan cagtooda.
Saameynta ugu xoogan ee xirnanshiyaha wadoyinka waxa ay sameysay Ardayda,Ganacsatada.Dadka wayeelka Ah ama Da’da ah ee an xamili karin in ay lugtoda maalaan,Cadceeda oo Kuliul,Dadka muruq maalka ah sameyn xoogan aya sido kale soo gartay.
Dadka Da’da ah ee lugeynaya jidadka Muqdisho aya shegaya in Madaxweyne Farmaajo ay kaga fadhiyeen wax uqabasho balse ay hada arkaan Jidadka oo laga xiro,iyo Amni darada oo meeshi ugu halista badneyd gaartay.
Madaxweyne Farmaajo oo ah Hogamiyaha Koooxda Qiyaano Qaran aya tira dhowr jeer ah kaga baxay shacabka soomaaliyeed balanqaadyo an loo meel dayin,Balanqaadyadasi been abuurka ah oo dadka soomaaliyeed ee waxyeelo xoogan kaso gaartay.